Avelao Andriamanitra ho tahaka azy - Fiangonan'Andriamanitra Soisa manerantany
haino aman-jery > Journal succession > Journal succession 2018-03 > Aoka Andriamanitra no ho toa azy
Mametraka fanontaniana vitsivitsy ho antsika rehetra izay manana zanaka izahay. "Efa tsy nankatò anao ve ny zanakao taloha?" Raha namaly ny eny ianao toy ny ray aman-dreny hafa rehetra, tonga amin'ny fanontaniana faharoa isika: "Efa nanasazy ny zanakao ve ianao noho ny tsy fankatoavana?" Haharitra hafiriana ny famaizana? Mazava kokoa hoy izy: "Nohazavaininao tamin'ny zanakao ve fa tsy hifarana ny famaizana?" Toa adala izany, sa tsy izany?
Isika izay ray sy osa tsy lavorary dia mamela ny zanatsika rehefa tsy nankatò. Misy toe-javatra izay hanasaziana heloka isika raha toa ka heverintsika fa mety amin'ny toe-javatra iray. Manontany tena aho hoe firy amintsika no mihevitra fa mety ny hanasaziana ny zanatsika irery sisa mandritra ny androm-piainan'izy ireo?
Ny Kristiana sasany dia maniry antsika hino fa Andriamanitra, ilay Raintsika any an-danitra, izay tsy malemy ary tsy lavorary, dia manasazy olona mandrakizay mandrakizay, eny fa na dia ireo mbola tsy nahare momba an'i Jesosy mihitsy. Hoy izy ireo: Andriamanitra, feno fahasoavana sy famindrampo.
Andao aloha hieritreritra an'izany isika satria misy elanelana lehibe eo amin'ny zavatra ianarantsika amin'i Jesosy sy ny zavatra inoan'ny Kristianina sasany momba ny fanamelohana mandrakizay. Ohatra: nandidy antsika Jesosy hitia ny fahavalontsika ary hanao soa hatrany na dia ireo mankahala sy manenjika antsika aza. Ny Kristiana sasany dia mino fa tsy mankahala ny fahavalony fotsiny Andriamanitra, fa mandoro azy ireo ara-bakiteny ao amin'ny helo ary tsy manam-pitiavana sy tsy mihetsika mandrakizay.
Etsy ankilany, nivavaka ho an'ireo miaramila nanombo azy tamin'ny hazo fijaliana i Jesosy: "Dada ô, avelao ny helok'izy ireo satria tsy fantany izay ataony". Ny Kristiana sasany dia mampianatra fa vitsy ny olona izay nofinidiny voalohany mba hamela azy ireo talohan'ny nahariana an'izao tontolo izao. Raha marina izany, dia tsy ho nisy fiovana lehibe toy izany ve ny vavak'i Jesosy?
Nisy mpitarika tanora tanora iray nitantara andiana tanora iray momba ny fihaonana amin'ny lehilahy iray. Izy tenany mihitsy no nahatsapa ho noterena hitory ny filazantsara tamin'ity lehilahy ity, saingy tsy nahavita izany nandritra ny resaka nifanaovan'izy ireo. Fantany taty aoriana fa maty tamin'ny lozam-pifamoivoizana ilay rangahy tamin'io andro io. "Efa ao amin'ny afobe ankehitriny io lehilahy io," hoy izy tamin'ny tanora kristiana tanora be dia be, "izay mijaly amin'ny fanaintainana tsy hay lazaina." Avy eo, aorian'ny fiatoana tampoka, dia nanampy izy hoe: "ary eo an-tsoroko izao". Notantarainy taminy ny momba ny nofinofy azony noho ny tsy firaharahiany. Nitomany teo am-pandriana izy, ary nanome ny hevitra mahatsiravina fa hijaly mandritra ny fotoana tsy voafehin'ny afobe mandrakizay io lehilahy mahantra io.
Manontany tena aho hoe ahoana no nahaizan'ny olona sasany nampifanaraka ny finoany tamim-pahakingana ka tamin'ny lafiny iray dia nino izy ireo fa tia an'izao tontolo izao Andriamanitra ka nirahiny Jesosy hamonjy. Etsy ankilany, mino izy ireo (miaraka amin'ny finoana tsy an-kijanona) fa Andriamanitra tsy mahalala fomba hamonjy ny olona ary tsy maintsy alefantsika any amin'ny helo izy ireo noho ny tsy fahaizantsika. "Fahasoavana no amonjen'ny olona fa tsy asa," hoy izy ireo, ary marina izany. Ny hevitr'izy ireo, mifanohitra amin'ny filazantsara dia ny hiafaran'ny olona maharitra miankina amin'ny fahombiazana na ny tsy fahombiazan'ny asa fitoriana ny filazanantsika.
Jesosy no Mpamonjy, Mpamonjy sy Mpanavotra!
Toy ny itiavan'ny zanakay ny zanatsika tokoa, tsy mainka ve ny fitiavan'Andriamanitra azy ireo? Ity no fanontaniana mampiavaka - Tian'Andriamanitra mihoatra lavitra noho izay azontsika atao izany.
Hoy i Jesosy: “Aiza no misy raim-pianakaviana aminareo, izay mangataka hazandrano amin’ny zanany, dia manome bibilava ny zanany hahazoany trondro? ... Raha ianareo, izay ratsy fanahy, dia afaka manome zava-tsoa ho an’ny zanakareo, tsy mainka va ny Ray any an-danitra no hanome ny Fanahy Masina ho an’izay mangataka aminy! (Lioka 11,11 ny u. 13).
Ny marina dia araka ny voalazan’i Jaona amintsika: Tena tia izao tontolo izao Andriamanitra. « Fa toy izao no nitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanani-lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny Zanany ho amin’izao tontolo izao hitsara izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao.” (Jaona. 3,16- iray).
Ny famonjena izao tontolo izao - tontolo iray izay tian'Andriamanitra tokoa ka nandefa ny Zanany hamonjy azy - miankina amin'Andriamanitra sy Andriamanitra irery ihany. Raha miankina amintsika sy ny fahombiazantsika hitondrana ny filazantsara amin'ny olona ny famonjena, dia hisy olana lehibe. Tsy miankina aminay anefa izany, fa miankina amin'Andriamanitra ihany. Nandefa an'i Jesosy Andriamanitra hanatanteraka io andraikitra io, hamonjy antsika ary hanatanteraka azy.
Hoy i Jesosy: “Fa izao no sitrapon’ny Raiko, dia ny hahazoan’izay rehetra mahita ny Zanaka ka mino Azy fiainana mandrakizay; ary Izaho hanangana azy amin’ny andro farany » (Jao 6,40).
Anjaran'Andriamanitra mamonjy, ary tena manao tsara ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Hotahiny ny mandray anjara amin'ny asa tsara amin'ny fitoriana ny filazantsara. Na izany aza, tokony ho fantatsika koa fa miasa matetika Andriamanitra na dia eo aza ny tsy fahaizantsika.
Moa ve ny enta-mavesatra anao noho ny fieritreretana meloka noho ny tsy nitorianao ny filazantsara tamin'ny olona iray? Ampitao amin'i Jesoa ny enta-mavesatra! Tsy mivaky loha Andriamanitra. Tsy misy olona mikotrika amin'ny rantsantanany ary tsy maintsy mandeha any amin'ny helo noho izy. Tsara ilay Andriamanitsika ary mamindra fo ary mahery. Azonao atao ny matoky azy hiasa ho anao sy ho an'ny olona rehetra amin'ny fomba toy izany.
by Michael Feazell